Iyo nyowani vhezheni yeGNU Emacs 27.1 yave kuwanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani vhezheni yeGNU Emacs 27.1 yave kuwanikwa
Iyo GNU Project yakazivisa kuburitswa kwe iyo nyowani vhezheni yeakakurumbira mavara edhita "GNU Emacs 27.1", vhezheni mune iyo eyelash rutsigiro yakawedzerwa, pamwe nerutsigiro rweJSON parsing uye yakagadziridzwa rutsigiro rwezvinobuda uchishandisa raibhurari yeCairo, pakati pezvimwe zvinhu.
Kune avo vasingazive nezve ino inozivikanwa zvinyorwa edhita, ivo vanofanirwa kuziva izvo GNU Emacs yakawedzera, inogadziriswa, yemahara uye yakavhurika mameseji edhita yakagadzirwa nemuvambi weGNU Project, Richard Stallman. Iyi ndiyo inonyanya kufarirwa yemhuri yeEmacs yevanyori vanyori.
Ichi chinyorwa chemutauro chinowanikwa kune GNU / Linux, Windows uye macOS, Iyo yakanyorwa muC uye inopa Emacs Lisp semutauro wekuwedzera. Zvakare zvakaitwa muC, Emacs Lisp "mutauro" weLisp programming mutauro unoshandiswa neEmacs semutauro wekunyora.
Kusvikira kuburitswa kweGNU Emacs 24.5, chirongwa ichi chakagadziriswa pasi pekutungamirwa naRichard Stallman, uyo akaendesa hutungamiriri hwechirongwa ichi kuna John Wiegley mukudonha kwa2015.
1 Chii chitsva muGNU Emacs 27.1?
2 Maitiro ekuisa GNU Emacs paLinux?
Chii chitsva muGNU Emacs 27.1?
Mune iyi vhezheni nyowani yemupepeti a yezvinhu zvitsva zvinomira pachena ndiyo itsva yakavakirwa-mukati tabo bar bar ('tab bar mode') iyo inobvumidza iwe kuti ushande nema windows sematepi mukati memupepeti.
Chimwe chinhu chakakosha chitsva mune iyi nyowani vhezheni yeGNU Emacs 27.1 ndiyo pMikana yekudzora uye kutenderera mifananidzo usingashandise iyo ImageMagick package.
Mukuwedzera isu tinogona zvakare kuwana rutsigiro rwe JSON kuparadzanisa, pamwe nekuvandudzwa kwekutsigirwa kwekuburitsa uchishandisa raibhurari yeCairo.
Yeimwe shanduko dzakabatanidzwa mune iyi vhezheni nyowani yemupepeti:
HarfBuzz raibhurari yekupa zvinyorwa.
Yakavakirwa-mukutsigirwa kweanopokana-saizi manhamba muEmacs Lisp.
Mira kushandisa unexec kuronga kurodha pasi uchifarira iyo nyowani inotakurika yekurodha nzira.
Kufunga nezve izvo zvinodiwa neiyo XDG zvirevo kana uchiisa ekutanga mafaera.
Yakawedzera yekutanga faira.
Kugonesa default lexical zvinongedzo muEmacs Lisp.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo nezve chiziviso cheshanduro nyowani, unogona kuzvibvunza nekuenda ku inotevera chinongedzo.
Maitiro ekuisa GNU Emacs paLinux?
Kune avo vanofarira kugona kuisa uyu mupepeti pane avo masystem, ivo vanofanirwa kuziva izvo mazhinji ekuparadzira eGNU / Linux anopa maGNU Emacs mumabhuku avo, iyo yavanogona kungo tsvaga uye nekuisa iyo package kubva kune yavo software centre kana nerubatsiro rweyavo package package.
Semuenzaniso, ndivanaani Ubuntu, Debian kana chero vashandisi vanobva yeaya, ivo vanokwanisa kuisa mupepeti nekuvhura terminal uye typing inotevera kuraira mairi:
Kunyangwe yeUbuntu uye zvigadzirwa zvichibuda kune anovandudza uyo anonyora kodhi yemupepeti uye achivapa mukati mechinyorwa, icho chinogona kuwedzerwa nemurairo unotevera:
Kuisa GNU Emacs paUbuntu, pamwe nezvinobva mairi, isu tinongofanirwa kuvhura terminal (Tinogona kuita izvi nemubatanidzwa wekiyi Ctrl + Al + T) uye teedzera inotevera mirairo mairi:
Pano inyaya yekutarisa iko kuwanikwa kwekukurumidza kuisa pasuru yeshanduro nyowani.
Panyaya yeavo vari Arch Linux, Manjaro, Arco Linux kana chero vamwe vashandisi vanobvaiyo yekumisikidza inogona kuitwa nekuita unotevera kuraira mune terminal:
Nguva kune avo vanosarudza kushandisa Snap mapakeji, vanogona kuisa mupepeti nemurairo unotevera:
Finalmente kune avo vanofarira kuisa iyo nyowani vhezheni izvozviParizvino nzira chete ndeye kurodha pasi sosi kodhi yemupepeti kuti uiunganidze mukati meyako system.
Iyo nyowani vhezheni yeEmacs inogona kuwanikwa kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti mune yayo yekurodha chikamu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Iyo nyowani vhezheni yeGNU Emacs 27.1 yave kuwanikwa
Ndanga ndichishandisa Emacs kwemakore manomwe apfuura, uye ndechimwe chezvinhu zvinoshamisa uye zvinoshamisa zvandakawana muLinux (pamwe nePython neBash). Haisi chete yekugadzirisa kodhi; yakakwana pakubata zvinyorwa uye akajeka zvinyorwa zvinyorwa. Uchishandisa musanganiswa wekhibhodi macros uye mataurirwo enguva dzose, zvinokwanisika kuita mumaminetsi mashoma izvo izvo zvisina-kutanga zvingatora maawa kana kunyange mazuva :)
Slack yakaunza seti yezvinhu zvitsva, zvinosanganisira kunyorera